Akhriso War-murtiyeedka laga soo saaray shirka Wasaaradaha Dastuurka. | Balanbaalis.Com	Akhriso War-murtiyeedka laga soo saaray shirka Wasaaradaha Dastuurka. – Balanbaalis.Com
Akhriso War-murtiyeedka laga soo saaray shirka Wasaaradaha Dastuurka.
Magaalada Garowe waxaa lagu soo gaba gabeeyay shirkii 3aad ee ay yeeshaan Wasaaradaha Dastuurka ee Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada oo maalmahan ka socday Magaaladaasi.
Shirkan waxaa laga soo saaray War-Murtiyeed ka kooban 12 Qodob oo looga hadlay sida ay u wada shaqeynkaraan wasaaradaha Dastuurka ee dowladda dhexe iyo dowlad Goboleedyada iyo hanaanka dhamweystirka dastuurka KMG ah ee Soomaaliya.
Qodobada ka soo baxay Shirka Wasaaradaha Dastuurka ee Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada ayaa u qoran sidan:.